Google Play wepụrụ ngwa 85 gosipụtara mgbasa ozi mkparị | Gam akporosis
Google Play wepụrụ ngwa 85 gosipụtara mgbasa ozi na ekwentị
Google Play na-enwekarị nsogbu na ọtụtụ ngwa, dị ka ndị na-enyocha ndị ọrụ. Na mgbakwunye, n'ọmụmụ ihe dị iche iche Achọpụtala ngwa egwu. Storelọ ahịa ahụ ewepụla ngụkọta nke ngwa 85 ugbu a, nke raara nye iji gosipụta mgbasa ozi na ihuenyo mkpọchi ekwentị onye ọrụ. Ha gosipụtara mgbasa ozi na ihuenyo ekwentị ozugbo agbachi.
Ọ bụghị oge mbụ anyị ga-ahụ ụdị ikpe a, ọnwa ole na ole gara aga a maara adware ọ metụtara ọtụtụ ngwa na Google Play. Azịza n'okwu a abụwo otu, na-aga n'ihu na mkpochapụ ngwa ndị a niile nke ụlọ ahịa. Ha adịkwaghị.
Ndị nchọpụta nchekwa Trend Micro hụrụ ngwa ndị a. Ha niile nwere malware Ha akpọwo AndroidOS_Hidenad.HRXH. Ọ bụ mwakpo usoro nke raara nye iji gosipụta nnukwu mgbasa ozi na ekwentị ndị ọrụ. Mgbasa ozi ahụ pụtara mgbe onye ọrụ ahụ meghere ekwentị ma jupụta ihuenyo niile. Ọzọkwa, e mere ndokwa ịhapụ ha kwa minit ise.
N'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume ndị ọrụ izere mgbasa ozi ndị a. Ngwa 85 niile dị na Google Play. Ọtụtụ n'ime ha metụtara foto, dị ka Igwefoto Ime Anwansi ma ọ bụ Photo blur, ọ bụ ezie na e nwekwara ụfọdụ egwuregwu. Emeela ka ndepụta zuru ezu pụta ìhè, dị na akwụkwọ a.
N'agbanyeghị ọkwa ndị a, ọ dịghị nke ngwa nyere ọrụ arụmọrụ. Ha niile gbasoro ụkpụrụ Google Play ma rụọ ọrụ ọ bụla, yabụ enwere ike iji ha maka ebudatara ebudata ha. Agbanyeghị na ha na-echekarị 30 nkeji mgbe etinyere ha ruo mgbe egosipụtara mgbasa ozi mbụ ahụ.
Amabeghị mmadụ ole ndị ọrụ metụtara n'okwu a, ọ bụ ezie na ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị ihe dị oké njọ. Mana ọ bụrụ n’inwere nke ọ bụla n’ime ngwa ndị a gosipụtara ọtụtụ mgbasa ozi, ọ kacha mma iwepu ya na ekwentị gị. O di nwute, n'ezie ufodu udiri udiri a gha aghaghachi na Google Play n'ime oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Play wepụrụ ngwa 85 gosipụtara mgbasa ozi na ekwentị
Redmi Smart TV enweela ụbọchị ngosi
Google Play ga-ewebata njikwa ndị ọzọ maka ngwa ndị ebudatara na ụlọ ahịa ahụ